AMISOM oo sheegtay inay AL-shabab ka saarayaan gobolada Jubooyinka. – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxa ciidamad AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya Francisco madeira yaa sheegay inaysan muhiim gaara siinayn joogitaankooda Soomaaliya balse ay doonayaan inay Toos u raacayaan qorshaha ku aadan sidii ay AMISOM uga bixi lahayd dalka Soomaaliya.
Francisco madeira madaxa AMISOM ayaa amaanay ciidanka booliska AMISOM ee dalka Soomaaliya ku sugan kuwaasoo uu sheegay inay howlo aad muhiim u ah oo dhanka amaanka ah ka qabteen gobolada kala duwan ee ay dalka Soomaaliya kaga sugan yihiin.
Mar uu soo hadal qaadya ka bixitaanka AMISOM ee dalka Soomaaliya ayaa sheegay in golaha aamaanka ee qaramada midobay waqtigooda gaarsiiyay bisha May ee sanadka danbe qorshahaana uu sanadkii 2017-kii ku bilowday askari oo laga saaray Soomaaliya.
Kun kale ay bixi doonaan bisha labaad ee sanadka danbe
← Xildhibaan ka badbaaday qarax gaarigiisa lagu xiray.
Wasaarada maaliyada Soomaaliya oo ka jawaabtay eedaymo loo soo jeediyay. →